Juun, bisha ugu fiican iibka 20 sano ee majaajillada | Abuurista khadka tooska ah
Comics waa soo noqdeen: warshaduhu waxay helayaan bisha ugu wanaagsan ku dhowaad labaatan sano Juun
Manuel Ramirez | | General, dhowr
Maadooyinka ayaa leh in wax gaar ah taas oo indho-sarcaad ku sameysa malaayiin dad ah oo ku nool daafaha adduunka waana ku mahadsan tahay filimaanta Hollywood-ka ee tobankii sano ee la soo dhaafay waxay awood u yeesheen inay soo jiitaan dad badan oo ka helay bogaggooda muuqaal muuqaal aad u weyn oo lagu daray sheeko iyo qoraal aad loogu qaddariyo. Waxa ugu fiican qaabkan ayaa ah inay awood u leedahay inay na siiso aragtida noocyada kale ee farshaxanada markaan ka tagno kanaalka dhaqanka weyn ee superhero.
Warshadaha majaajillada ayaa sidoo kale ku jira daqiiqad wanaagsan iyo in ka badan kadib markay ogaadeen in bishii Juun ay heleen tirooyin iib ah oo aysan haysan ku dhowaad labaatan sano. Haddii bisha Juun ay tahay in lagu calaamadeeyo kalandarka majaajillada, sanadkii hore ayay heleen 1.000 Milyan dollar iyo in iibka arinta daabacan ay gaadhay 900 milyan oo doolar.
Waxa kaliya ee taban ayaa ah in iibka dhijitaalka ah uu hoos ugu dhacay tirooyinka 2013 100 Milyan dollar iyo haysashada 10% wadarta guud ee iibka adduunka ee noocan ah sheyga muuqaalka muuqaalka ah. Waa in la sheegaa in tirooyinkan, ugu yaraan si dijitaal ah, aysan ku jirin rukumashada adeegyada sida Marvel Unlimited, Comixology Unlimited ama Scribd.
Marka la eego tirada la helay bishii Juun, wadar ahaan 8,5 milyan oo nuqul oo ah 300-ka majaajilo ee ugu sareysa xilligan. Waa inaan tagnaa Diisambar 1997 si aan ugu dhawaano lambar lamid ah markay dukaamada dhigayaan amarrada 9 milyan majaajillo ah. Marka la soo koobo, waa koror boqolkiiba 42 ah shan sano ka hor ilaa bishan, iyo 56 boqolkiiba laga soo bilaabo 15 sano ka hor illaa bishaas Juun.
Laba majaajilo ayaa lagu eedeeyaa helitaanka tirooyinkaas tirada badan. Dhinac, waxaan leenahay Dagaalkii Sokeeye II No.1 of Marvel oo iibisay 381.737 nuqul, iyo kan kale oo loo iibiyay Batman No.1 laga bilaabo DC Comics oo leh 280.360 unug oo la iibiyey.
Labana waa sababaha tan soo nooleynta majaajillada: mid ayaa ugu wacan helitaanka fudud ee majaajillada internet-ka, iyo tan kale oo ay ugu weyn tahay caan-soo-saaridda filimada oo keenaya dhagaystayaal cusub oo doonaya inay iibsadaan majaajillada majaajilooyinkooda.
Haddii aad tahay qof jecel majaajillada, ha seegin ballanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Comics waa soo noqdeen: warshaduhu waxay helayaan bisha ugu wanaagsan ku dhowaad labaatan sano Juun
Buurta Sawirada Sawirka Sare
GIMP waxay heshaa cusbooneysiin weyn oo leh hagaajinta naqshadeynta, maareynta midabka iyo waxyaabo kale oo badan